Fiatrehana ny Coronavirus Hananan’ny Paramed trosabe ny fanjakana
Efa nivoaka tanteraka tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara. Efa voafehy amin’ny ampahany ihany koa ny valan’aretina Covid 19 hoy Ralibera Jerisoa, filoha nasionalin’ny sendikan’ny Paramed eto Madagasikara.
Tondron'ny fahantrana marolafy Anisan’ny fitaovana ilaina hanatrarana ny ODD
Teboka telo lehibe no nivoitra nandritra ny atrik’asa fakan-kevitra mahakasika ny Tondron’ny Fahantrana marolafy (Indice de Pauvreté Multidimensionnelle-IPM): famaritana miaraka ny atao hoe IPM;
Fampindramam-bola mikasika ny “Opération d’appui budgétaire en gestion des risqué de catastrophes avec option de tirage differé (CATDDO), hoy ny fampitam-baovao. Ny 07 agositra no natao sonia iza io. Nankatoavina ihany koa ny fampitrama-bola natao ho an’ny « Programme d’Appui des politiques de développement pour la riposte à la pandemie de covid-19 » natao ny 8 septambra teo amin’i Madagasikara sy ny IDA. Marihina fa haroso eo anivon’ny antenimieram-pirenena ireo volavolan-dalàna amin’ny fivoriana ara-potoana ho avy io, araka ny tatitry ny Filankevitry ny Minisitra. Nandritra io ihany koa moa no nisian’ny fanendrena tompon’andraikitra ambony maro.